Top Video: Somali Film Fadeexo ah Ka Duubtay Duqa magaalada TORONTO | kalshaale.com	Tuesday, March 11th, 2014	Home
Top Video: Somali Film Fadeexo ah Ka Duubtay Duqa magaalada TORONTO
May 22, 2013 - jawaab	Dhalinyaro Soomaali ah oo kamid ah kuwa Daroogada iibiya kuna nool dalka Canada ayaa shaaciyey inay daroogo ka gadeen Mayarka ama duqa magaalada Toronto Rob Ford.
Kooxdan Soomaalida ah ayaa sheegay inay hayaan filim ay ka duubeen iyagoo daroogo ka gadaya Duqa magaalada Toronto Rob Ford, isla markaana cabaya sigaar laga sameeyey Daroogada. Waxaa sidoo kale la sheegay filimkan inuu ka muuqdo Duqa magaalada Toronto oo caynaya siyaasada Xisbigiisa.
Filimkan oo lagu duubay telefoonka Mobile-ka ayaa soconaya 90 ilbiriqsi, balse kooxda Soomaalida ah ee filimkan duubay ayaa saxaafada ka codsaday inay ka iibsadaan oo ay ka siistaan lacag gaareysa$200.000 (Labo Boqol oo kun oo dollar).
Labadan jariirad ee Toronto Star iyo Gawker oo lagu yaqaan soo bandhigida warar fadeexad ah ayaa diiday inay jeebkooda ka bixiyaan lacagta lagu gadayo filimkan kooxda Somalida iibineyso, balse taageerayaashooda ayey ka codsadeen inay lacagta isku soo dar daraan si loo soo gado filimkan.
Jariirada Toronto Star iyo Gawker ayaa hada bilaabay lacag aruurin ay shacabka ka qeyb qaadan karaan oo ay ku doonayaan inay ku aruuriyaan lacagtii ay ku gadan lahaayeen Filimkan. Suxufiyiinta ka socda labadan warbaahin ayaa sheegay inay indhahooda ku arkeen filimkan balse ay hada doonayaan inay soo iibsadaan si ay u shaaciyaan.
Labadan warbaahin ayaa websiteka la yiraaho Indiegogo ka furay bog ay ku aruurinayaan lacagta iyagoo hada helay lacag gaareysa $74,000. Shacabka Canada ayaa sugaya filimka oo la baahiyo.
Mayar Mr.Rob Ford, ayaa beeniyey inuu isaga yahay qofka filimkaasi ka muuqda, wuxuuna sheegay inay arrintan buun buuniyeen saxaafada oo la doonayo in sumcada looga dilo. Balse suxufiyiinta filimkan ay tuseen dhalinyaradan Soomaalida ah ayaa dhamaantood isku raacay inuu isaga yahay qofka filimkaasi ka muuqda.
Arrintan ayaa hadii ay rumowdo noqoneysa fadeexadii ugu weyneyd ee lasoo gudboonaata Duqa magaalada Toronto.
Dhalinyarada Soomaalida ah ee daroogada ku gada dalka Canada ayaa horey saameyn ku yeeshay amniga magaalada Toronto iyagoo lagu eedeeyo in ay koox koox isu dilaan, isla markaana amniga qeybo kamid ah magaaladaasi khal khal ku haya iyagoo ka ganacsada Daroogada, hayeeshee filimkan fadeexada ah ayaa noqonaya saameyntii ugu weyneyd oo ay ku yeeshaan Siyaasada dalkaasi.
WARARKII HORE	Deg deg Ah: Gen: Indho Cade oo Sir Culus Sheegay & Arin ka jirta Muqdisho (Maqal)
- Mar 10, 2014	Muqdisho (Kalshaale.com) General Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacade Siyaasiga Somaaliyeed ayaa waxaa uu sheegay arimo ...
War Culus+Dhegaysi: Axmed Godane oo Mudo Kadib soo hadlay, Kuna Dhowaqay Arin Naxdin badan & Dagaalada Socda ?
- Mar 10, 2014	Baraawe (Kalshaale.com) - Hogaamiye kooxeedka ugu sareeya kooxda Al-Shabaab, ayaa soo duubay cajalad beerlaxaawsi, oo uu ...
Daawo: CAQLI XUME Ina Aadan Carab: BUUHODLE DAGAAL Ayaan Ka Ridayaa, Khasab ayay ku shaqaynaysa Puntland
- Mar 10, 2014	Buuhodle (Kalshaale.com) Maamulka Beeleedka Garoowe ayaa sidii caadada u ahayd ee ay ku jirtey ...
Top News: RW C/wali Sheekh oo furka Tuuray, kana kadlay arin xasasi (Maqal)
- Mar 10, 2014	Muqdisho (Kalshaale.com) Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in guulo badan ay ka gaareen dagaaladii ka ...
Daawo: Muungaab oo Hawiye Canaantay Sidoo kalana Caayey ISAAQ & DAAROOD
- Mar 10, 2014	Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaaalada Muqdisho Gen: Mungaab Ayaa markii ugu Horaysay Wuxuu ...
Dhegayso Ceebta: Garoowe oo Pasport-kii Soomaaliga Dadkii Lagu Xidhay Inay Sheegtaan Beesha Majerteen (Waraysi)
- Mar 10, 2014	Garoowe (Kalshaale.com) Waxaa Magaalada Garoowe Ka Taagan Dhibaato Xoogan oo Qaadashada Passport-ka Soomaliga kala ...